DEG-DEG: Halyeygii Talyaaniga Ee Paulo Maldini Iyo Laacib Ka Tirsan AC Milan Oo Laga Helay Xanuunka Coronavirus - Gool24.Net
DEG-DEG: Halyeygii Talyaaniga Ee Paulo Maldini Iyo Laacib Ka Tirsan AC Milan Oo Laga Helay Xanuunka Coronavirus
Halyeygii xulka qaranka Talyaaniga ee Paolo Maldini iyo wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Daniel ayaa ka mid noqday tobannaanka kun ee Talyaaniga ah ee uu ku dhacay xanuunka Coronavirus, sida ay shaacisay AC Milan.
War-saxaafadeed ay soo saartay AC Milan, ayaa waxay ku sheegtay in Agaasimaheeda farsadamada oo ah Paolo Maldini baadhitaan lagu sameeyey lagu ogaaday inuu ku dhacay caabuqa Coronavirus, isla markaana ay astaamihiisu si cad uga muuqdaan.
Warkan oo soo yeedhay saacado kooban kaddib markii uu xiddiga Juventus ee Paulo Dibala iyo marwadiisu ay shaaciyeen inuu ku dhacay Coronavirus, ayaa waxay Milan xaqiijisay in Paolo Maldini uu labadii usbuuc ee u dambeeyey karantiil ku jiray oo aanu cidna la kulmin.
“AC Milan waxay xaqiijinaysaa in Paolo Maldini oo ah agaasimaha Farsamada, uu ogaaday inuu xidhiidh la sameeyey qof laga helay xanuunkan oo uu isagana ku dhacay Coronavirus, isla markaana uu bilaabay in astaamihiisu ay kasoo muuqdaan.” Sidaa waxa lagu yidhi war-saxaafadeed ay soo saartay AC Milan.
“Shalay ayaa baadhitaan lagu sameeyey, natiijaduna waa inuu hayo xanuunku. Wiilkiisa Daniel oo afka hore uga ciyaara kooxda da’yarta AC Milan oo tababarka la qaadanayay kooxda koowaad ayaa sidoo kale laga helay.” Ayuu war-saxaafadeedka Milan raaciyey.
Bayaanka ay Milan soo saartay, waxa kale oo ay kaga warrantay sida ay tahay xaaladda waqtigan ee halyeyga Talyaaniga iyo wiilkiisu, waxaanay tidhi: “Paolo iyo Daniel waxay haddaba dhamaystirteen laba usbuuc oo guryahooda aanay dibedda uga soo bixin oo aanay cid kale xidhiidh la samaynin. Waxay hadda kusii jiri doonaan takoor illaa inta caafimaadkoodu soo kabanayo, waxaanay raacayaan tilmaamaha masuuliyiinta caafimaadku jideeyeen.”
Ciyaartoyda kale ee AC Milan ayaa halis ku jira maadaama Daniele uu tababarka la qaato, sidoo kalena uu Maldini ku xidhan yahay oo uu dhinaca farsamada u qaabilsan yahay.
Si kastaba kooxdu may sheegin wax tallaabo ah oo ay ka qaadayso ciyaartoygeeda kale oo marka horeba aan loo ogolayn inay guryahooda kasoo baxaan maadaama dalkaas uu xanuunka si xun u saameeyey.